Xog: Raiisul Wasaare Khayre oo la filayo inuu dhawaan isku shaandhayn ku sameeyo Golaha Wasiiradda. – Hornafrik Media Network
Raiisul Wasaare, Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inuu si rasmiya u gado gali la tashiyadda ku saabsan isku shaandhayn uu ku sameeyo Xukuumadda Toddobaadka soo socda. Waxayna illo ku dhow dhow Xafiiska Raiisul Wasaaraha u sheegeen Hornafrik in isku shaandhaynta ay dhici doonto dhamaadka Bishan.
Yaa Ku baxaya Isku Shaandhaynta,?
isku shaandhayntan ayeey xogta ay heshay Hornafrik waxaa ugu badan Wasiiradda ku baxaya kuwa Hawiye iyo Wasiiro kale, kuwaas oo lagu qancinayo Xildhibaanadda gadoodsan. Waxaana Khayre uu ka niyad jabay in Wasiiradaasi ay qancin waayeen Beelahooda iyo Xildhibaanadda ugu jira Baarlamaanka oo ah kuwa ugu badan ee diidan Xukuumadda uu hogaamiyo.
Wasiiradda ay Xil ka qaadistu dul saaran tahay ayaa waxaa ka mid ah Wasiiradda Arrimaha Dibadda, Amniga, Gaashaandhiga iyo kuwo kale. Waxaana Wasiiradan lagu badali doonaan Xildhibaano ka tirsan Kudladda Horu Socod ee Baarlamaanka dhawaan ka dhex samaysan tahay.
Mooshinkii ka dhanka ahaa Khayre.
Mooshinkii la hadal hayay in laga keeni doono Xukuumadda uu hogaamiyo Khayre Bisha August ayaa u muuqda inuu meesha ka sii baxayo. Waxaana Xildhibaanaddii Mooshinkaan waday intooda badan lagu qanciyay in Xilal la siinayo, iyo ballan qaadyo kale. Waxayna Dadka Siyaasadda ka faalooda aaminsan yihiin in haddii isku shaandhayntan lagu qanciyo Xildhibaanadda iyo Beelaha wax saluugsan ay taasi meesha ka saari karto Mooshinki la waday.